केही दिन मर्निङ वाक नगर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह - टि. एल. एन पोस्ट
Home समाचार केही दिन मर्निङ वाक नगर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह
केही दिन मर्निङ वाक नगर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह
२२ पुस काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयले मौसममा केहीदिनदेखि आएको परिवर्तनका कारण वायु प्रदूषण बढेको भन्दै मर्निङ वाक नगर्न आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले एक अपिल जारी गर्दै यस्तो आग्रह गरेका छन् । “केही दिनदेखि मौसममा आएको परिवर्तनसँगै काठमाडौं उपत्यकाभित्रको वायु प्रदूषण निकै बढेको छ,” उनले भनेका छन्, “यसले श्वासप्रश्वासमा कठिनाईलगायत विविध स्वास्थ्य समस्याहरु देखा पर्दछ ।
१–मर्निङवाकमा जाने वा घर बाहिर गएर शारीरिक व्यायाम गर्ने गरिएको छ भने केही दिनका लागि रोकौँ ।२–फोहोरहरुको उचित व्यवस्थापन गरौँ तर फोहोर जलाउने काम नगरौँ, नगराऔँ । कसैले फोहोर जलाउने काम गर्ने गरेको छ भने त्यसलाई निरुत्साहित गरौँ र बन्द गर्न लगाऔँ ।
Previous articleसंसद विघटनको मुद्दामा आजबाट सुनुवाइ सुरु हुँदै
Next articleपीएसएलको ड्राफ्टमा सर्वाधिक महंगो श्रेणीमा सन्दिपको नाम